News Collection: अझै जुरेन लगन
अझै जुरेन लगन
‘मोस्ट ब्याचलर’ नेपाली कलाकारलाई बिहेको बारेमा प्रश्न तेस्र्याउने हो भने प्रायले एउटै जवाफ दिन्छन्, लगन जुरेपछि बिहे भइहाल्छ नि ! अझ वैशाख महिनातिर सोधे केहीले त मङ्सिर महिना काटिन्न होला पनि भन्न भ्याउँछन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बिहे गर्ने उमेर पुगेका थुप्रै कलाकार छन् । कसैले समय नपाएर बिहे गरेका छैनन् त कसैले उपयुक्त जोडी नपाएर बिहे गरेका छैनन् ।
यो वर्षको मङ्सिर महिनाले टाटा बाइबाई गरिसकेको छ तर केही चर्चित ब्याचलरहरूले बिहेको कुनै सुरसार गरेको देखिएन । त्यसो त माघ र फागुन महिना चोखै बाँकी छन् तर उनीहरूको चाला हेर्दा उनीहरू यस वर्ष पनि अविवाहित हुने छाँट देखिएको छ । कलिउडमा महानायकको पगडी गुथेका र उमेरले पचासको हाराहारीमा पुगेका राजेश हमालका दौतरीहरूको छोराछोरीको पनि बिहे गर्ने बेला भइसकेको छ तर उनलाई कुनै हतार छैन रे । फुर्सद नपाएर बिहे गर्न नपाएको बताउँदै आएका राजेशलाई पत्रकारले धेरै सोधेको प्रश्न पनि हो यो, बिहे कहिले गर्ने ? सायद यसको उत्तर उनीसँग पनि छैन ।
उनको नाम बेलाबेलामा युवतीहरूसँग नजोडिने होइन तर बिहेका लागि भने उनले अझै उपयुक्त उम्मेदवार फेला पार्न सकेका छैनन् । मङ्सिर गयो माघ, फागुनसम्म कोही भेटिएला कि ?
त्यसो त अर्का अविवाहित नायक श्रीकृष्णले पनि मङ्सिर कटाइहाले । कहाँ भेटिएलाकी श्वेता खड्कासँग बिहे गर्लान् भनेको त उल्टो झगडा पो पर्‍यो रे । झगडा परालको आगो कि ग्यासको भट्टी त्यो त समयले नै बताउला तर झण्डै चालीस पुग्न लागेका श्रीकृष्ण तत्काल एक्ला हुने चाहिँ पक्का छ । उमेर बताउन नचाहने श्रीकृष्ण भने साइत नजुरेर बिहे नभएको बताउँछन् । बिहेका लागि घरमा ठूलो ‘प्रेसर’ पनि छ उनलाई तर वधु नै फेला नपारेपछि कसको पो के लाग्छ र ? यो वर्ष पनि उनी व्याचलर नै हुने हुन् कि ? पोइल जान कस्सिएकी गायिका कोमल वलीका भाइले पनि बिहे गरिसके तर भाइले अझै भिनाजु पाउन सकेका छैनन् । आफूभन्दा कान्छा युवाले बिहेको प्रस्ताव राखेपछि उनी निकै द्विविधामा छन् । बिहे नगर्ने भनेको होइन तर मनले खाएको पनि त हुनुपर्‍यो कोमल भन्छिन् । केही महिना पहिले उनले मङ्सिर नकट्ला कि भनेकी थिइन् तर पुस सुरु भइसक्यो, उनको लगनको कुनै छनक छैन ।
नायिका दीपा श्रीले पनि मङ्सिर कटाइन् तर भनेको जस्तो वर खोजिनन् । बिहे नै नगर्ने होइन तर मनले खाएको हुनुपर्ने उनको चाहना छ । अर्की नायिका उषा पौडेलले पनि उपयुक्त वर नपाएर बिहे नगरेकी हुन् रे । उनले ३० त काटिसकिन् तर समस्या उही वरको हो । के थाहा सिनामङ्लस्थित नयाँ घरमा सरेपछि उनको साइत जुर्ला कि ? रोनाधोना गर्लको उपमा पाएकी निरुता सिंहको बिहे गर्ने उमेर उहिल्यै पुगेका हो तर उनी आफ्नै काममा व्यस्त छन् । नायिका रेजिना उप्रेतिलाई पनि बिहे गर्ने हतार छैन । क्यारियर बिगारेर हतारमा बिहे नगर्नेमध्येमा पर्छिन् रेजिना । प्रेमिको कमी नभएकाले पनि उनले बिहेको हतार नगरेको हुनसक्छ । पछिल्लो समयमा देखिएका कलाकारहरू नन्दिता केसी, युना उप्रेती, राजबल्लभ कोइराला, जीवन लुँइटेलहरू त भरखरै क्यारियर बनाउँदैछन् तर उमेर पुगिसकेकाहरू चाहिँ किन लगन कटाउँदैछन् त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमै केही कलाकारले छानी छानी बिहे गरिरहेको बेलामा यस्ता कलाकारहरूले उनीहरूसँग किन पाठ नसिकेका होलान् ।